KENYA: Baaqii Raila Odinga ee Shaqo joojinta oo u muuqda inaan la dhageysan | SAHAN ONLINE
KENYA: Baaqii Raila Odinga ee Shaqo joojinta oo u muuqda inaan la dhageysan
NAIROBI – Mucaaradka dalka Kenya ayaa shacabka ugu baaqay in aysan shaqo tegin maanta oo Isniin ah,hase yeeshee jawaabtii baaqaas laga bixiyey ayaa u muuqata mid xaddidan iyadoo inta badan ganacsigu furan yahay.
Waxaa maanta dib loo furay inta badan dukaamo badan oo ku yaalay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya balse magaalada galbeed ee Kisumu ayaa markii ugu horreysay muddo maalmo ah waxaa waddooyinka socda baabuurta iyo basaska oo aan shaqeyn tan iyo sideedii August.
Deegaanka Kibera oo ah isku raranka ugu weyn ee magaalada Nairobi oo mucaaradka ay ku xoogan yihiin ayaa waxaa shaqeynaya taksiyada iyadoona dukaamada cuntada iyo kaararka taleefoonada albaabada loo furay.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dad badan ay dhaqan-gelinayaan baaqa mucaaradka ee ah inaan la shaqo tagin sababo la xiriira tuhunka ku saabsan in doorashada lagu shubtay.
Guddiga doorashada ayaa Madaxweyne Uhuru Kenyatta u Iclaamiyey in uu doorashada ku guuleystay uuna 1.4 milyan oo cod ka saro maray Raila Odinga.
Sidoo kale kormeerayaasha caalamiga ah ayaa sheegay in codbixinta ay u dhacday si sax ah.